मन्त्रि अधिकारीको मृत्यु पछि नेता योगेश भट्टराईले लेखे सबैलाई रुवाउने यस्तो स्टेटस – पुरा हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन्त्रि अधिकारीको मृत्यु पछि नेता योगेश भट्टराईले लेखे सबैलाई रुवाउने यस्तो स्टेटस – पुरा हेर्नुहोस
ताप्लेजुङमा दुर्घटनामा परेको हेलिकोप्टरमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जना सवार रहेको बताइएको छ। हेलिकोप्टरमा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, विरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, युवराज दाहाल, धुब्रदास भोछिभया र अर्जुनकुमार घिमिरे सवार रहेको बताइएको छ। हेलिकप्टरमा सवार सबैको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले पुष्टि गरेको छ।
ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर नजिकैको भिरमा मन्त्री अधिकारीसहित ७ जना सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो । एयर डाइनेस्टीका अनुसार पाइलट प्रभाकर केसीले चलाएका थिए। दुर्घटनाको समाचार बह्रिरा आएसंगै नेता तथा कलाकारले दुख व्यक्त गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् ।
यसै क्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र नेकपाका नेता योगेश भट्टराईबीच आज अपराह्न ४ः०० बजे सिंहदरबारमा भेट्ने सल्लाह भएको रहेछ । मन्त्री अधिकारीलाई भेट्न सिंहदरबारमा कुरेर बसेका योगेश अपरिकल्पनीय दुर्घटनाको खबर सुनेर स्तब्ध भए ।
हिजो (मंगलबार) हाम्रो भेट एउटा विवाहमा भएको थियो । मैले मेरो जिल्लाको विमानस्थलको क्षमता विस्तारबारे कुरा गर्नुपर्ने भएकाले भेट्नुपर्ने छ भनें । उहाँले म भोलि काठमाण्डुबाहिर जान्छु । साढे ३ बजे काठमाण्डु फर्कन्छु, त्यसपछि चार बजेतिर मन्त्रालयमा भेटौं भन्नुभयो । आज भेट्ने सल्लाह गरेर हामी छुटिएका थियौं । तर, त्यो भेट नै अन्तिम भेट हुन पुग्यो । जसलाई भेट्नको लागि कुरेर बसेको हो, उसैको मृत्युको खबर सुन्दा भक्कानो फुटेर आयो ।
भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा रविन्द्र अधिकारिसंग खिचेको आफ्नो फोटो हाल्दै लेखेका छन् : प्रिय साथी म निशब्द छु ! म स्वीकार गर्दिन् ! तिम्रै आवाजले एकपटक बताइदेउन् यार् ।